Global Voices teny Malagasy » Faritr’i Sahel: Momba ny fandoavana tamby hanavotana ireo takalonaina · Global Voices teny Malagasy » Print
Faritr'i Sahel: Momba ny fandoavana tamby hanavotana ireo takalonaina
Voadika ny 04 Oktobra 2010 8:26 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika (en) i Lova Rakotomalala, avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Eoropa Andrefana, Alzeria, Borkina Faso, Espaina, Frantsa, Madagasikara, Mali, Maoritania, Nizera, Senegal, Somalia, Togo, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fivavahana, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Ny fakàna takalonaina nataona vondrona Islamika iray antsoina hoe Al-Qaeda in The Islamic Maghreb (AQIM)  izao no malaza any amin'ny Faritr'i Sahel  izay nipariaka nanerana ny firenena maro any avaratr'i Afrika. Ho fanafahana ireo takalonaina dia manao tsindry ara-politika amin'ireo firenena Afrikana voakasika amin'izany ireo governemanta sy orinasa, na hizotra amin'ny fandoavana mivantana tamby ara-bola . Na izany aza, ny tetikasa hoe handoa tamby dia mazàna no dradraina ho tsy mahomby sy mampidi-doza ao anatin'ny fotoana maharitra.
Ny fakàna ankeriny tao Niger tamin'ny Septambra nakàna mpiasa miisa dimy avy amin'ny orinasa frantsay Areva mikirakira ny nokleary  sy mpiasa roa avy amin'ny orinasa Satom  dia manipika fa lasa faritra mena mamoa-doza izy ity any amin'ilay faritra. Nilaza ny maha-tompon'andraikitra azy tamin'ny fakàna ankeriny an'ireo olona fito (teratany Frantsay dimy, miampy teratany Togole iray, ary iray avy any Madagascar) ny AQIM.
Tamin'ny Aogositra 2010, nitatitra ny AFP fa takalon'aina espaniola roa nalain'ny AQIM no efa nafàhana  [fr] rehefa nandoa vola ny governemanta Espaniola, ary nanamora ny fifanakalozana babo tamina mpaka ankeriny avy amin'ny AQIM voafonja tany Maoritania ny governemanta tao Mali.
Ny gazety an-tsoratra Alzeriana La Tribune dia nitatitra  [fr] fa ny amiraly mibaiko ny andian-tafika frantsay any amin'ny faritra, Édouard Guillaud dia niteny hoe raha ny toerana raisin'i Frantsa nilazany fa “tsy tetikady mahomby” mihitsy ny fandoavana tamby dia tsy mandà ihany koa ry zareo raha toa ka mety mitranga izany làlana izany. Tao anatina lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Tamby ara-bola, fitaovana iray mahomby ho an'ny vondrona mpampihorohoro,” dia manindry  i Ali Boukhlef fa ny fandoavana tamby ara-bola dia fandrisihana sy fanohanana ny asa fampihorohoroana.
Nahatonga ny mpandinika maro hametra-panontaniana manahiran-tsaina ny fakana ankeriny farany teo.
Ny bilaogy l’Observatoire du nucléaire miteny hoe :
.., ny zava-nisy momba ilay fakàna ankeriny dia mampanontany tena ny tsirairay amin'ny fahamoran'ny nanatanterahana ilay fakàna ankeriny, ka nanome varavarana misokatra ho an'ny manampahefana Frantsay hirotsaka ara-tafika. Raha ny marina, ny AREVA sy ny manampahefana Frantsay dia efa nahazo fampitandremana tamin'ny fomba maro samihafa fa tandindonin-doza ny mpiasan-dry zareo ao amin'ny toby fitrandrahana uranium ao Niger. Hatramin'izay, zara raha nisy ny fanamafisana ny fiarovana tokony hilaina ary sahala amin'ny hoe nandà ny fanampian'ny manampahefana avy ao Niger aza hoe ny AREVA.
Naneho hevitra tao amin'ny gazety Alzeriana La Tribune (via Allafrica.com ), i Saïda Benhabyles, filohan'ny Federasion Iraisam-pirenen'ireo Fikambanana samihafa ivondronan'izay niharan'ny asa Fampihorohoroana” (la Fédération internationale des associations de victimes du terrorisme) nilaza fa ireo fandoavana tamby ara-bola no[fr]: ” tena fototry ny fidiram-bola mampandeha ny asan'ireo vondrona mpampihorohoro ao Afrika faritr'i Sahel.”
Ho fanoherana ny asan'ny AQIM izay mahazo vahana any amin'ny faritra rehetra akaikin'ny sisintanin'ny Sahel, ilay tranonkala Borkinabe San Finna dia mametra-panontaniana raha tokony hanome alalana ny fametrahana tobim-pamaharana tafika vahiny  ao amin'ny tanin-dry zareo ireo firenena Afrikana. Manome fomba fijery roa mifanohitra mikasika ity olana ity ilay tranonkala: Voalohany, Tomi, izay mankasitraka ny mety ho endrika fiaraha-miasa iraisam-pirenena rehetra dia miteny ny heviny  [fr]:
Olana maro samihafa toy ny fanondranana zava-mahadomelina, SIDA, fiparitahan'ny fitaovam-piadiana atomika, loto sy fampihorohoroana no tsy ho voavaha mihitsy raha tsy misy fiaraha-miasa iraisam-pirenena, ary tsy asiana resaka izay tanjaky ny firenena tsirairay amin'izany.
Atsy ankilany i Tozi manazava fa  [fr]:
… Andiany vitsivitsy (tobin-tafika) etsy sy eroa ao Niger, Borkina Faso sy Maoritania tsy hahafongotra velively ny asa fampihorohoroana efa mamàka lalina ao Sahel. Any Somalia, inona izao no mba efa vita hanoherana ny Shebabs sy ny mpikambana ao amin'ny Hezb al-Islam ? Any Iraka ary indrindra indrindra fa ao Afghanistan, mba nisy nataontsika ve hamongorana ireo mpino mahery fihetsika ireo? … Ny antony mampiroborobo ity zavatra ity dia satria mitombo be ny tahan'ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra, ny mahantra, ny olona very fanantenana azon-dry zareo karamaina. Raha isika no tsy manome izay fitaovana tena ilaina sy mirotsaka an-tsehatra amin'ny ady atao amin'ny fampihorohoroana, dia ho pehan'ny vondrona AQIM ny foto-drafitrasantsika, ho fatiny ny fizahantanintsika (ohatra fotsiny, manodidina ny 400,000 ny mpizahatany any Borkina Faso ary 900,000 any Senegal) ary izany no hiteraka karazan-korontana sy fivakisana ara-tsosialy maro samihafa.
Mametraka izao fanontaniana manaraka izao ny bilaogy Mecanopolis: Inona marina moa ny AQIM ary iza no ao ambadik'izy io?  no sady manazava:
Nanomboka niaka-tsehatra ny AQIM tany amin'ny Janoary 2007 tany ho any, avy amin'ny vondrona Alzeriana nitondra anarana hoe “Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC)”, io vondrona io dia nahitàna mpihoko Tuareg marobe avy amin'ny faritry ny tany efitra manomboka any Niger ka hatrany Maoritania
Ao amin'ny tranonkalan'ireo teratany Borkinabe any am-pielezana, Fasozine, ho an'i Bark Biiga ny tahotra ny AQIM dia tsy maintsy avy any amin'ny lohany no miainga :
Manoloana ny loza mitatao mandrakariva ateraky ny AQIM ao Sahel, tsy maintsy ialantsika ny sangodina tsy misy fiafaran'ny herisetra mba hitadiavantsika vahaolana maharitra hizorana mankamin'ny fandriampahalemana, na izany ho an'ny vahoakan'ny faritra, na ho an'ireo vahiny tonga ao mba honina na hiasa. Ny zavatra mifanohitra amin'izay, raha maka ny toeran'i dokotera “Johny-hoavy-tsyhoela” i Frantsa, vao mainka hanasaro-javatra izany toy izay mijery hatrany ifotony ny olana misy.
Nanamaloka ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena Maliana ny fakàna ankeriny farany teo. i Bark Biiga dia manoratra  ao amin'ny tsanganany fa:
Tsy ny fahantrana lalina sy ny tsy fisian'ny rafi-pitantanana ara-panjakana any amin'ny faritra Sahel Maliana ve no mahatonga azy ho toeram-pamaharan'ny AQIM ao amin'ilay faritra? Tsy hoe fotsiny ho fanafahana ireo takalonaina fa koa mba hahazoana antoka fa i Mali, Niger, Maoritania, Alzeria na i Borkina Faso dia tsy ho paradisan'ny mpampihorohoro ary tsy hanohintohina ny fandrosoan'ny vahoaka Afrikana izay efa nandoa betsaka tamin'ny fanjanahantany, ny tsy fahaiza-mitantana, ary ny fihisatry ny fandrosoana.
i Niger dia iray amin'ireo firenena mitàna ny lohany manerantany amin'ny famokarana uranium , nefa dia izy koa no manana ny tahan'ny harin-karena faobe farany ambany isam-batan'olona ao Afrika. Ny fitsinjarana ny tombontsoa azo avy amin'ny fitrandrahana an'io loharanon-karena an-kibon'ny tany goavana io dia mbola tena olana isaky ny ambaratonga maro.
Ao anatin'ny Republicain-Niger, H. Adamou dia miteny :
Ny fifandraisana manokana nisy teo amin'i Frantsa sy Niget tany aloha tany dia nitondra tamin'ny fanaovan'i Frantsa ampihimamba ny uranium amin'ny vidiny izay tena ambany dia ambany sy toa mananihany, vokatry ny fifanarahana manokana nosoniavina tamin'ny 1961. Ny fifanarahana iray nifanaovana tamin'ny Imounaren dia tsy nisy valaka tamin'ny taloha izay tsy nahazoan'ny fitondrana ao Niger afa-tsy ny 33% amin'ilay orinasa. Na izany aza , ny vidiny ivarotana ny uranium dia mbola ambany noho izay hita eo amin'ny tontolon'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena amin'izao fotoana.
Tsy ela akory izay dia nisy fihaonambe roa natao mba hitadiavana tetikady, ny iray dia fihaonamben'ny mpitantana ambony avy amin'ireo firenena any Sahel tamin'ny 26 Septambra . Io dia narahan'ny fihaonambe iray nahitàna irao lohandohan'ny sampam-pitsikilovana avy any Alzeria, Maoritania, Niger ary Mali tamin'ny 29 Septambra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/04/9587/
 Al-Qaeda in The Islamic Maghreb (AQIM) : http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda_Organization_in_the_Islamic_Maghreb
 Faritr'i Sahel: http://en.wikipedia.org/wiki/Sahel
 mpiasa miisa dimy avy amin'ny orinasa frantsay Areva mikirakira ny nokleary: http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5gYefmE5Vhpn6xX31ysGbwAiTnt6gD9IIEUG82?docId=D9IIEUG82
 mpiasa roa avy amin'ny orinasa Satom: http://news.yahoo.com/s/afp/20100916/ts_afp/nigerkidnapfrance
 takalon'aina espaniola roa nalain'ny AQIM no efa nafàhana: http://www.riminfo.net/Otages-espagnols-d-Aqmi-la-presse-algerienne-denonce-le-versement-d-une-rancon_a1793.html
 dia nitatitra: http://www.latribune-online.com/evenement/40506.html
 miteny hoe: http://observ.nucleaire.free.fr/
 via Allafrica.com: http://fr.allafrica.com/stories/201009271275.html
 tokony hanome alalana ny fametrahana tobim-pamaharana tafika vahiny: http://www.sanfinna.com/deuxsonsdecloche.htm
 Inona marina moa ny AQIM ary iza no ao ambadik'izy io?: http://www.mecanopolis.org/?p=19744
 ny tahotra ny AQIM dia tsy maintsy avy any amin'ny lohany no miainga: http://www.fasozine.com/index.php/le-blog-de-barkbiiga/le-blog-de-barkbiiga/4566-traque-daqmi-au-sahel-la-france-joue-au-medecin-apres-la-mort
 firenena mitàna ny lohany manerantany amin'ny famokarana uranium: http://resosol.org/InfoNuc/technique/uraniumF.html
 dia miteny: http://www.republicain-niger.com/Index.asp?affiche=News_Display.asp&articleid=5474&rub=Finances+et+%C3%A9conomie
 fihaonamben'ny mpitantana ambony avy amin'ireo firenena any Sahel tamin'ny 26 Septambra: http://fr.allafrica.com/stories/201009280619.html
 nahitàna irao lohandohan'ny sampam-pitsikilovana : http://www.tsa-algerie.com/diplomatie/reunion-a-alger-des-chefs-des-services-de-renseignement-des-desaccords-apparaissent_12383.html